Ngwaọrụ gass mmiri disp Ndị na-enye mmiri na-enweghị sịlịnda
Na-arịwanye elu na ụlọ ọrụ ọfịs, itieutomna ọbụna n'ime ụlọ onwe gosiputara ndị na-enye mmiri. Oge a Ngwaọrụ maka mmiri gassing na-enye mmiri oyi dị jụụ ma dị ụtọ, mmiri ọ drinkingụ drinkingụ na ime ụlọ okpomọkụ, dabere na ụdị ngwaọrụ ahọpụtara yana mkpa ndị mmadụ na-eji ya.
Carbonated na-ebunye mmiri mmiri O zuru oke ma na oghere, ebe emechiri emechi na ulo oru ndi mmadu, tinyere ulo ndi mmadu, ya bu ebe obula mmiri di nma di nkpa.
Ndị na-emepụta ihe ọ drinkingụ waterụ mmiri ọ drinkingụ availableụ dị n'ahịa na-anwa iji nweta ogo na ogo dị elu nke mmiri akwadoro site na iji teknụzụ ọhụụ. N'otu oge ahụ, ha na-elekwa anya maka usoro ọgbara ọhụrụ nke ngwaọrụ nke ga-adaba n'ime ụlọ ọ bụla. Uru ọzọ nke ngwaọrụ ndị enyere ebe a mmiri carbonated bụkwa ọrụ ha dị elu.
Dabere na mkpa gị, anyị nwere ike ịhọrọ n'ọtụtụ ngwaọrụ klaasị maka nkwadebe nke mmiri na-egbukepụ egbukepụ:
Ndị na-enye mmiri ga-ebugharị cylinder na-enweghị cylinder emebewo ma chọọ ka eji ya mee ihe dị iche iche, ebe ọ bụghị naanị ngwaọrụ na-arụ ọrụ, kamakwa ọ na-achọ ohere nke etinyere ya.
Ngwọta teknụzụ kachasị ọhụrụ eji emebe na imepụta nke ngwaọrụ a yana iji ihe kachasị mma maka imepụta ya na-ekwe nkwa ọrụ nke onye nkesa na arụmọrụ ya kachasị elu.
Hi-Klas mmiri dispenser nwere ike ịkwadebe ruo lita 45 nke mmiri oyi na-egbuke egbuke kwa elekere na ruo lita 13 kwa elekere nke mmiri ọkụ.
Igwe ahụ na-enye ụdị mmiri atọ dị ụtọ.
Mmiri a kwadebere nwere ike ịbụ oyi, ọkụ ma ọ bụ ụlọ okpomọkụ, ọ nwekwara ike ịbụ carbonated.
Enwere ike ị wụsara mmiri na-atọ ụtọ ma sie ike nke Hi-Class dispenser ozugbo na arịa dị iche iche dị elu. Nke a ga-ekwe omume site na ntinye nke ngwa mgbakwunye na ngwaọrụ.
Ngwakọta nke enyo oji dị n'ihu nke ngwaọrụ ahụ na igwe anaghị ata nchara na otu ihe nchịkwa na-eme ka ọ dị mma na-enye gị ohere ịmepụta imepụta ọgbara ọhụrụ nke dabara n'ime ime ọ bụla, ma n'otu oge ahụ na-arụ ọrụ aka na njirimara arụmọrụ nke ngwaọrụ ahụ.
Onye na-enye mmiri na-enweghị mmiri na-enweghị Pro-Stream
Onye na-enye mmiri na-enweghị mmiri na-enweghị Pro-Stream na-enye gị ohere ịkwadebe mmiri oyi, mmiri ọkụ na carbonated na obere oge, nke uto mara mma.
Ihe ejiri ihe nkesa Pro-Stream bu ihe eji emeputa ihe n'oge a na oru di elu, na ekele na kọlụm a na-ekpuchi ọkụ na ogwe aka mmetụ, onye nkesa dị mfe iji. Onye ọrụ ahụ gosipụtara n'ụzọ doro anya banyere ọnọdụ ọrụ nke ngwaọrụ ahụ maka ozi egosipụta.
Onye na-enye Pro-Stream nwere ike ịrụ ọrụ na igwe eji esi mmiri ọkụ, oyi ma ọ bụ sistemu gas. Ekele maka sistemụ na-achịkwa ọnọdụ ọrụ nke ngwaọrụ ahụ, ọ ga-ekwe omume belata ike oriri na-akpaghị aka.
Enwere ike ime ka mmiri dị ọkụ ruo 98 Celsius ebe ana arụmọrụ nke ngwaọrụ ahụ na-enye gị ohere ịjupụta iko 215 nwere ike nke 250 ml kwa awa. Ihe bara uru nke igwe a bu ikike iji ngwa ngwa dozie ihe ọ hotụ drinksụ niile na-ekpo ọkụ.
Nhọrọ nke ịkwadebe oyi na mmiri na-egbuke egbuke na-enye ihe ruru lita 15 mmiri kwa elekere.
Ndị na-enye mmiri J-Klas
Ndị na-enye mmiri J-Klas ejiri mara mma kachasị elu nke enwetara site na iji teknụzụ ọgbara ọhụrụ, nke na-eme ka a rụọ ọrụ a pụrụ ịdabere na ya yana iji ngwaọrụ eme ihe.
A na-ejikwa ịnyịnya ígwè a eme ihe n'ọfịs, n'ụlọ mmanya, ụlọ oriri na ọụ .ụnakwa n'ụlọ ndị mmadụ. A na-emepụta ha n'ụdị abụọ:
- TOP dị iche - ngwaọrụ maka arịgo n'elu tebụl n'elu
- nhọrọ IN - ka a kwụnye gị n'okpuru tebụl dị n'elu.
Igwe ahụ na-akwadebe ụdị mmiri anọ:
na ụlọ okpomọkụ
na-ekpo ọkụ na ọnọdụ okpomọkụ ruo 98 Celsius
mmiri na-egbuke egbuke
Onye nkesa J-Class nwere ikike abụọ: lita 30 nke mmiri a kwadebere kwa awa na lita 45 nke mmiri kwa elekere.
Ihe ntinye mmiri nke Niagara Top nke na-enweghị sịlịnda bụ ngwaọrụ na-adịgide adịgide, na-arụ ọrụ nke ọma ma nwee ntụkwasị obi nke na-akwadebe mmiri dị ụtọ ma na-atọ ụtọ, na-ezute ụkpụrụ kachasị elu, enwere ike iji ya rụọ ọrụ nke ọma n'ọfịs, ebe ọrụ na ọfịs.
Onye na-ekesa Niagara Top ga-enyere gị aka idozi nsogbu ọ bụla metụtara ọrụ nnyefe na nchekwa mmiri, yana nchekwa nchekwa karama plastic. N'ihi ngwaọrụ ọkachamara a, ọ ga-ekwe omume ịnye ndị ọrụ na ndị ahịa mmiri dị mma ma dịkwa mma, na-enweghị iwe na-ewe iwe mgbe niile nke mmiri mmiri.
Ebumnuche a iji mee ihe na ebe niile ọha na eze, na-eme ka arụ ọrụ na-enweghị nsogbu mgbe ị na-ekesa ọbụna nnukwu mmiri na-egbukepụ egbukepụ na mmiri, na-enye gị ohere ịmejupụta ụdị ụgbọ mmiri niile ngwa ngwa na ibelata ụgwọ nke ọkọnọ na nchekwa nke mmiri ọ drinkingụ drinkingụ.
-TOP - tebụl
-IN - okpuru
Ihe eji enye mmiri na-enye mmiri na-ainderụ mmiri na-aINKụ sịlịn bụ ngwaọrụ zuru oke maka ịkwadebe nnukwu mmiri oyi dị mma ma dịkwa ụtọ. Ngwaọrụ a zuru oke maka mpaghara nri, n'ụlọ mmanya, ụlọ nri na ụlọ oriri na nkwari akụ, yabụ ebe ọ bụla ọ dị mkpa iji kwadebe nnukwu mmiri ọ drinkingụ qualityụ dị mma n'oge dị mkpirikpi.
Ngwaọrụ a nwere ike jikọta ya na sistemụ ọ bụla dị n'okpuru.
Ejiri ihe kachasị mma na-ekesa DRINK TOWER, na-eme ka ogologo oge na-enweghị nsogbu. Nhazi ya na-enye ohere maka nchịkọta ịdị ọcha nke mmiri ọ drinkingụ preparedụ a kwadebere.
Ihe nkesa mmiri H2O na-enweghị cylinder na-enye m bụ ngwaọrụ ọgbara ọhụrụ emebere maka nkwadebe nke mmiri oyi na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ, mmiri ọ hotụ hotụ na carbonated, yana mmiri na ụlọ okpomọkụ. Kọmpat akụkụ, oge a na imewe na kensinammuo ime bụ uru nke a na ngwaọrụ, dị na abụọ na nsụgharị:
- okpokoro n'elu - TOP
- n'okpuru-tebulu na a spout - IN.
5 / 5 ( 1 votu )
9 lihe mkpuchi mmiri na-enweghị cylinderngwaọrụ eji agba mmiri mmiriebe obibi mmirionye na-enye mmiri5l na-ebunye mmiriigwe na-enye mmiri mmiri mmirimmiri dispenser priceonye na-enye mmirionye mgbaputa mmirimmiri na-ekesa Warsawonye na - ekpo mmiri ọkụonye na-enye mmiriOnye na - enye mmiri mmiri 5lMmiri mmiri AllegroOnye na-enye mmiri na-enweghị mmiriọnụahịa ihe mgbapụta mmirionyinye onyinye mmirionyinye okike mmiri na - ebunye mmirionye na-enye mmirionye na-enye mmiri maka ọfịsebe obibi mmiriọnụahịa ụlọ mmirimmiri ọensụ dispụ mmirieden mmiri nkesaEden water dispenser ntuziakaonye na-enye mmiri mmiri carbonatedsachaa mmiri dispenser priceOnye na-enye mmiri ikuku carbonatedmmiri na-ekesa otu esi arụ ọrụonye na-enye mmiri mmiri Krakowonye na - enye mmiri mmirioasis mmiri na-ebu mmiriolx mmiri mmirimmiri ọensụ dispụ mmiriigwe nzi mmiri na bekeeoké mmiri ozuzo na-ebunyeonye na-enye mmiri na frizaonye na - enye mmiri na friza ka esi arụ ọrụmmiri na-ekesa Warsawmmiri dispenser wrocławmmiri dispenser akụkụmgbazinye mmiri mgbazinyemmiri mgbazinye ụgwọ mgbazinye mmiriihe nkesa co2mgbata mmirionye na-enye mmiri na frizammiri na-ebu mmiri site na ntanetịndị na-enye mmirindị na-enye mmiri maka ụlọ ọrụndị na-ere mmiri mmirindi nkesa mmiriOtu onye na-enye mmiriOnye na-enye mmiri frijimmiri mgbapụta 5 galọn karama dispenser 18ngwaọrụ maka nzacha na mmiri gassNgwaọrụ maka mmiri gassingngwaọrụ maka gassing mmiri allegrommiri gasification ngwaọrụ ceneo